Doorashadii Turkiga oo Wakhtigeedii Laga Soo Hormariyay. | ogaden24
Doorashadii Turkiga oo Wakhtigeedii Laga Soo Hormariyay.
Apr 20, 2018 - Aragtiyood
Madaxweyne Tayyib Erdogan ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in bisha June ee soo socota la qaban doono doorashadii horey loo qorsheeyey inay dhacdo November 2019.
Go’ aankan Erdogan horey ugu soo dhigay xiliga doorashada ayuu sheegay inay la xidhiidho in si deg deg leh loo dhaqan geliyo nidaamka cusub ee dowlada Turkey ee awooda dheeraadka ah siinaya Xafiiska Madaxweynaha.
Sanadkii lasoo dhaafay ayuu Erdogan ku guuleystay in afti dadweyne lagu ansixiyey dib u habeynta dastuurka lagu sameeyey oo lagu qeexay in nidaamkii hore ee awooda Raysalwasaaraha iyo Baarlamaanka loo wareejiyey xafiiska Madaxweynaha. Balse nidaamkan cusub ayaa dhaqan galaya oo kaliya kadib doorashada Madaxweynaha oo hada la sheegay in la qaban doono 24 bisha June ee sanadkan.
Erdogan ayaa sheegay in lama huraan tahay in la dhaqan geliyo awooda xafiiska Madaxweynaha si looga hortago caqabadaha badan ee horyaala dalka sida, dagaalka ka socda wadanka ay jaarka yihiin ee Suuriya iyo xasilinta dhaqaalaha & Ganacsiga dalka Turkiga.
Dastuurka cusub ayaa awoodaha uu siinayo Madaxweynaha ay kamid yihiin inuu isagu leeyahay go’aanka xil magacaabista Golaha Wasiirada iyo xil ka qaadista, inuu sidoo kale uusan inta badan u baahneyn taageerada Baarlamaanka ama xafiiska Raysalwasaaraha oo awoodiisa hoos loo dhigay.
Wuxuu sharciga cusub sidoo kale meesha ka saarayaa sharcigii hore oo sheegayey in Madaxweynaha uu noqdo siyaasi dhex dhexaad ah oo aan xil ka hayn xisbiyada dalkaasi.